မနေ့ညက ဖြစ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အပြောင်းအရွေ့ (၅) ခု - MySport Myanmar
မနေ့ညက ဖြစ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အပြောင်းအရွေ့ (၅) ခု
၁. ဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ မန်ယူ
နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မန်ယူအသင်းဟာ စပို့တင်း ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို (၅) နှစ်ခွဲ စာချုပ်၊ (၂၀၂၅) ခုနှစ်အထိ၊ (၁) နှစ် ထပ်တိုးခွင့်နဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသွားပြီး ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်အနေနဲ့ မန်ယူအသင်းမှာ ကျော့နံပါတ် (၁၈) ကို ဝတ်ဆင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂. ပီယာတက်ခ် နဲ့ ဟာသာဘာလင်
ဟာသာဘာလင်အသင်းဟာ အေစီမီလန် တိုက်စစ်မှူး ပီယာတက်ခ်ကို အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင် ယူရို (၁၇) သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ပီယာက်တ်ခ်ဟာ အေစီမီလန်အသင်းအတွက် ပွဲစဉ် (၄၁) ပွဲ ကစားခဲ့ပြီး ဟာသာဘာလင်အသင်းမှာတော့ ကျောနံပါတ် (၇) ကို ဝတ်ဆင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. ဖလိုရန်ဇီ နဲ့ ဗလန်စီယာ
ဗလန်စီယာအသင်းဟာ ရိုးမားအသင်း ခေါင်းဆောင် ဖလိုရန်ဇီကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ရာသီကုန်အထိ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ တရားဝင် ကြေညာသွားခဲ့ပြီး သူဟာ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်ပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ညာအစွန် နောက်ခံ ကစားသမားအဖြစ်နဲ့သာ ပွဲထွက် ကစားရပါတယ်။
၄. အယ်လ်ကာဆာ နဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်
ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ကာဆာကို ဒေါ့မွန်အသင်းကနေ ကလပ် စံချိန်တင် ပြောင်းရွေ့ကြေး ယူရို (၂၅) သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုသွားခဲ့ပြီး ဗီလာရီးရဲလ် အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ကာဆာကို ကာလရှည် (၅) နှစ် ခွဲ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
၅. ဒန်နီရို့စ် နဲ့ နယူးကာဆယ်
နယူးကာဆယ်အသင်းဟာ စပါးအသင်းရဲ့ ဘယ်အစွန် နောက်ခံလူ ဒန်နီ ရို့စ်ကို လက်ရှိရာသီကုန် အထိ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဘယ်အစွန် နောက်ခံလူ ဒန်နီ ရို့စ်ဟာ လက်ရှိရာသီမှာ နယူးကာဆယ်အသင်းရဲ့ (၃) ယောက်မြောက် ကစားသမားသစ် ဖြစ်သွားပါတယ်။
၁. ဖာနနျဒကျဈ နဲ့ မနျယူ
နညျးပွ ဆိုးလျရှားရဲ့ မနျယူအသငျးဟာ စပို့တငျး ကှငျးလယျလူ ဖာနနျဒကျဈကို (၅) နှဈခှဲ စာခြုပျ၊ (၂၀၂၅) ခုနှဈအထိ၊ (၁) နှဈ ထပျတိုးခှငျ့နဲ့ ချေါယူလိုကျပွီ ဖွဈကွောငျး အတညျပွုသှားပွီး ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈအနနေဲ့ မနျယူအသငျးမှာ ကြော့နံပါတျ (၁၈) ကို ဝတျဆငျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
၂. ပီယာတကျချ နဲ့ ဟာသာဘာလငျ
ဟာသာဘာလငျအသငျးဟာ အစေီမီလနျ တိုကျစဈမှူး ပီယာတကျချကို အပွောငျးအရှမေ့ပိတျခငျ ယူရို (၁၇) သနျးနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပွီး ပီယာကျတျချဟာ အစေီမီလနျအသငျးအတှကျ ပှဲစဉျ (၄၁) ပှဲ ကစားခဲ့ပွီး ဟာသာဘာလငျအသငျးမှာတော့ ကြောနံပါတျ (၇) ကို ဝတျဆငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃. ဖလိုရနျဇီ နဲ့ ဗလနျစီယာ
ဗလနျစီယာအသငျးဟာ ရိုးမားအသငျး ခေါငျးဆောငျ ဖလိုရနျဇီကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ရာသီကုနျအထိ အငှားနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈတယျလို့ တရားဝငျ ကွညောသှားခဲ့ပွီး သူဟာ ကှငျးလယျ ကစားသမား ဖွဈပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျး ညာအစှနျ နောကျခံ ကစားသမားအဖွဈနဲ့သာ ပှဲထှကျ ကစားရပါတယျ။
၄. အယျလျကာဆာ နဲ့ ဗီလာရီးရဲလျ
ဗီလာရီးရဲလျအသငျးဟာ တိုကျစဈမှူး အယျလျကာဆာကို ဒေါ့မှနျအသငျးကနေ ကလပျ စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို (၂၅) သနျးနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈတယျလို့ အတညျပွုသှားခဲ့ပွီး ဗီလာရီးရဲလျ အသငျးဟာ တိုကျစဈမှူး အယျလျကာဆာကို ကာလရှညျ (၅) နှဈ ခှဲ စာခြုပျ ခြုပျဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
၅. ဒနျနီရို့ဈ နဲ့ နယူးကာဆယျ
နယူးကာဆယျအသငျးဟာ စပါးအသငျးရဲ့ ဘယျအစှနျ နောကျခံလူ ဒနျနီ ရို့ဈကို လကျရှိရာသီကုနျ အထိ အငှားနဲ့ ချေါယူလိုကျပွီ ဖွဈကွောငျး အတညျပွုခဲ့ပွီး ဘယျအစှနျ နောကျခံလူ ဒနျနီ ရို့ဈဟာ လကျရှိရာသီမှာ နယူးကာဆယျအသငျးရဲ့ (၃) ယောကျမွောကျ ကစားသမားသဈ ဖွဈသှားပါတယျ။
MySport Myanmar2020-01-31T07:58:40+06:30January 31st, 2020|Football, La Liga, News, Premier League, Serie A|